विद्युतीय कारोवार ऐनको कुब्याख्या गरियो : वरिष्ठ पत्रकार घिमिरे – Kalika News
विद्युतीय कारोवार ऐनको कुब्याख्या गरियो : वरिष्ठ पत्रकार घिमिरे
"समर्पणबाट अधिकार सुनिश्चित हुँदैन "
५ बैशाख २०७६, बिहीबार ०९:०९ , मा प्रकाशीत
विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ र ४८ लाई मुख्य आधार मान्दै प्रहरीले पत्रकारलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । संविधान र कानुनलाई समेत चुनौती दिनेगरि धरपकड हुन थालेपछी राज्यको चौथो अंग पत्रकार जगत नै त्रसित बन्न पुगेको छ । आम पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले त आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले वरिष्ठ पत्रकार एवं देश सञ्चार डिजिटल अनलाइनका सम्पादक युवराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौँ । कालिकान्युजका लागि राजु सापकोटाले घिमिरेसँग गर्नु भएको कुराकानी यसप्रकार छ :
सवाल : साइबरक्राइम सम्बन्धि कानूनलाई देखाएर,समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लिएर जाने, केरकार गर्ने क्रम रोकिएन । केहिदिनअघि मात्रै पोखरामा एक जना पत्रकार पक्राउमा परे । यि पछिल्ला घटनाक्रममा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
जवाफ : अहिले अत्यन्तै आतंकित वातावरण सुरु भइसकेको छ । मन परी र सिमारहित तरिकाले यो साइबर क्राइम अन्तरगतका कानूनको कुव्याख्या गरियो ! जसले पत्रकारिताको क्षेत्रमा ठुलो आतंकको वातावरण पैदा गर्‍यो । अहिलेको घटनाले सरकार त्यसबाट रमाएको अथवा त्यसबाट आउने खतराहरु प्रति त्यति सचेत नभएको देखिन्छ ।
सवाल : यो साइबरक्राइम जसरी चर्चामा आइरहेको छ, जस्ता घटना भईरहेका छन, त्यसको भित्रि मनसाय के हुन सक्छ ?
जवाफ : त्यो त अहिले नै भन्न सक्ने कुरा भएन । तर प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोगले उत्पन्न हुनसक्ने क्राइमप्रति सरकार, राज्य सम्वेदनशील हुनु अथवा सचेत हुनु र त्यो अनुसारको कानून बनाउनु स्वाभाविक हो । यद्यपि प्रेसलाई कसैको उजुरी कै आधारमा साइबर क्राइम संवन्धि मुद्दा लगाईन्छ भने वा कसैले लगाउछ नियमभन्दा विपरित त्यसको प्रयोग भएको मानिनुपर्छ ।
सवाल : नेपालमा प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्था छ, जसले पत्रकारले गलत गरेको-नगरेको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । र यदि गलत गरेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा कारवाही गर्ने अधिकार पनि उसलाई प्रदान गरिएको छ । तर काउन्सिल भन्दा अगाडि त अरु राज्यका संयन्त्र त देखिए नि ?
जवाफ : हो राज्यका संयन्त्र अघि देखिए । उनीहरुमा न्याय हुने तरिकाले, सहज तरिकाले छानविन थालनी नगरि पहिला नै पत्रकारहरुलाई दण्डित गर्ने आचरण देखियो । अहिले जुन केही संहिताहरु बने नि, त्यसमा संचार माध्यमले आपत्ती जनाएपछि आवश्यक संतुलनको लागि पत्रकारहरु नै सम्मीलित एउटा समिती गठन भयो र मलाई लाग्छ त्यसले आफ्नो सुझाव पनि दिएको छ । समितिको सुझाबमा साइबर क्राइमबारे यस्ता गलत कुरा सुझाईएको छैन । त्यही पनि मलाई लाग्छ साइबरक्राइमको प्रयोग कुनै पनि रुपमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुर्‍याउने खालको हुनुहुन्न । प्रेसको स्वतन्त्रता भनेको प्रेसले मनपरी गर्ने, बल्याकमेल गर्ने भन्ने होईन , त्यो छुट पनि छैन । तर यो साईबर क्राईम संबन्धी कानूनलाई पत्रकार तर्साउनकै लागि दुरुपयोग भएको उदाहरणहरु बढ्न थाले, जुन दु:खद छ ।
सवाल : उसो भए, सरकारले पत्रकारहरुको मामिलामा निर्णय गर्न प्रेस काउन्सिल नै एकमात्र महत्वपूर्ण संबैधानिक निकाय हो भनेर बुझ्ने कहिले त ?
जवाफ : खै ! यसको संरचनादेखि लिएर गठनहरुमा पारदर्शीता हुनुपर्छ पहिला । राजनीतिक प्रयोजनको लागि, दलीय भागबन्डाको आधारमा प्रेस काउन्सिल गठन हुन्छ । त्यो भएपछी परिणाम कसरी आउँछ ? काउन्सिलका मान्छेहरु पत्रकारहरुको हकहितको संरक्षण भन्दा पनि उनीहरुबाट हुने गल्तिहरुलाई स्वीकार गराउनेतर्फ मात्रै लाग्यो । काउन्सिलमै पनि विभिन्न तरिकाबाट आ-आफ्नो शक्ति बनाउन खोजेको देखियो ।
सवाल : विशेषतः यो पत्राकारिता गरेर खुलासावाला समाचारहरु लेख्नेहरु सरकारको पछिल्लो व्यवहारबाट त्रसित हुनुपर्ने देखियो नि ! अब यसरी नै डराएर, यसरी नै त्रसित भएर काम गर्न सकिन्छ त ?
जवाफ : हो ! प्रेसको लागि एउटा आतंकको अवसर सिर्जना भएको छ । त्यसमा पनि दुखको कुरो के छ भने हामी पत्रकार पनि दलिय कोटामा बाडिएका छौ । जसले गर्दाखेरी समस्या निम्तिएको छ । यदि दलिय छाया नहुदो हो त यो सरकार साइबर क्राईमलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आइलाग्दैनथ्यो होला । कसैका लागि हामी यदि प्रयोग हुन चाहान्छौ भनेदेखी समस्या ज्यूकात्यू रहन्छन । यदि सरकारको यी प्रवृतिहरुको कसैगरी बिरोध भएन भनेदेखी मलाई लाग्छ सरकारकै नियन्त्रणमा नेपाली संचार माध्यमले काम गर्नुपर्छ । र सरकारले पनि यहि मान्यतालाई अगाडि बढाउँछ ।
सवाल : युवराज जी, पत्रकारहरुको सवालमा तालुकदार मन्त्रालय भनेको संचारप्रविधि मन्त्रालय हो । संचारमन्त्रिको भूमिका अहिले पछिलो समयमा पत्रकारमैत्री छ छैन ? साँच्चै पत्रकारहरुको हकहितमा उहाँले काम गरेको देखियो देखिएन ? तपाइँको मूल्याङ्कन के छ ?
जवाफ : यो सरकार संबिधानमा विश्वास गर्ने सरकार हो भनेदेखि संबिधानले अभिव्यक्त गरेको अधिकारहरु,प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरु संरक्षण गर्नेपर्छ । संविधानमा लेखिएका बुदाहरुको आदर गर्न सरकार कटिवद्ध हुनैपर्छ । उहाँहरुमा त्यसतो आचरण र निर्णय हुनुपर्‍यो ।
सवाल : कतिपयले पत्रकारको संरक्षकको रुपमा संचारमन्त्रीलाई लिएको पाइयो, पत्रकारहरुको सवाल पनि उहाँसँगै गएर जोडिने भयो । सञ्चारमन्त्रीलाई पत्रकारहरुले अभिभावक मान्ने कि नमान्ने ?
जवाफ : पक्कै पनि यो प्रजातन्त्रमा एउटा व्यक्ति विशेषलाई अभिभावक मानिन्छ भने त्यसले धेरै दुष्परिणाम निम्त्याउन सक्छ । सञ्चारमन्त्री पत्रकारका अभिभावक हुन सक्दैनन ।
सवाल : पछिल्लो समय जति घटनाक्रम देखियो, जति पनि प्रश्नहरु उठे, यो यस्तै रहिरहला कि केहि समाधानको उपाय निस्किएला ?
जवाफ : समाधानको उपाय त किन हुँदैन ? एउटा त पत्रकारहरुले आफ्नो व्यवसायीक हित बिरोधी कामको विरोध गर्न सक्नुपर्‍यो । यदि यसरी नै पत्रकारको हकहित र संविधानले दिएको अधिकार माथि नै सरकारले आघात पुर्‍याईरह्यो भने अदालत छ । अदालत जानु पर्‍यो । तर के भनेदेखी समर्पणबाट अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । जवसम्म समर्पणको बानी सुधार हुँदैन समस्या बल्झिरहन्छ । बेलैमा सचेत नहुने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी घटनादर बढिरहन्छ । र संगै पत्रकारिता पनि खतरामा परिरहन्छ ।
उडिरहेको हेलिकोप्टरले सामान झारेपछि गठित छानबिन समिति सोलुखुम्बुमा, किन झर्छ बारम्बार सामग्री